अन्तिम विश्वकप खेल्दैछन क्रिकेट जगतका यी ६ स्टार खेलाडी
१ जेठ २०७६ एजेन्सी: आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता सुरू हुन १५ दिन बाकी छ । यो क्रिकेट विश्वकपको १२औ संस्करण हुनेछ तथा पाँचौ पटक इङ्गल्यान्ड तथा वेल्समा हुनेछ ।यसभन्दा पहिले यी दुवैले १९७५ क्रिकेट विश्वकप, १९७९ क्रिकेट विश्वकप, १९८३ क्रिकेट विश्वकप, १९९९ क्रिकेट विश्वकप आयोजन गरिसकेका छन् ।
यो विश्वकप आयोजना गर्ने अधिकारको छिनोफानो सन् २००६ अप्रिलमा गरिएको थियो । विश्वकप हरेक ४ वर्षमा हुने गर्छ ।जस्मा १० ओटा देशले सहभागिता जनाएको छ ।यस भन्दा पूर्व सन् २०११ तथा २०१५ मा १४ वटा टिम खेल्न पाउने व्यस्था थियो ।
हरेक ४ बर्षमा विश्वकप हुने गर्छ र सबै खेलाडीको बिश्वकप खेल्ने सपना बोकेका हुन्छन् ।बिश्वकप खेल्नु पाउने खेलाडीलाई निकै यादगार तथा गर्वको कुरा हो । कतिपय खेलाडीले भने धेरै संस्करणको विश्वकप खेल्ने अवसर पाउछन् ।
अहिले सम्म भारतका महान खेलाडी सचिन तेन्दुलकर र पाकिस्तानका जाभेद मियादले सर्वाधिक ६ संस्करणको विश्वकप खेलेका छन् ।
सन् २०११ मा सचिन तेन्दुलकरले आफनो अन्तिम विश्वकप खेलेका थिए र त्यो बेला भारतले विश्वकपको उपाधि जितेको थियो ।
संस्करण विश्वकप केहि खेलाडीको लागि भने अन्तिम विश्वकप हुनेछ । विश्वकपपछि ती खेलाडीले सम्भवत सन्यास घोषणा गर्नेछन् ।
इंग्ल्याण्ड र वेल्सको विश्वकप अन्तिम विश्वकप हुने ६ खेलाडी को को हुन् त ?
वेष्ट इन्डिन्जका सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको दोस्रो नम्बरमा रहेका क्रिस गेलका लागि यो विश्वकप अन्तिम हुनेछ । उनले यो विश्वकपपछि सन्यास लिने घोषणा गरिसकेका छन् । ३९ वर्षीय गेलले गत फेब्रुअरीमा ७ महिनापछि वेष्ट इन्डिजलाई एकदिवसीय सेटमा फर्काएका थिए ।
इंग्ल्यान्डविरुद्धको सिरिजअघि उनले विश्वकप आफ्ना लागि अन्तिम हुने घोषणा गरेका थिए ।
२० वर्ष लामो क्रिकेट करिअरमा उनले २ सय ८४ एकदिवसीय खेल खेलेका छन् । ३७ दशमलब १२ को औसतमा उनले ९ हजार ७ सय २७ रन बनाएका छन् । यस समयमा उनले २३ शतक र ४९ अर्धशतक बनाएका छन् ।वेष्ट इण्डिजबाट उनले सन् २००४ मा च्याम्पियन्स ट्रफी र सन् २०१६ को टी-ट्वान्टी विश्वकप जितिसकेका छन् ।
२. महेन्द्र सिंह धोनी
भारतका टिमका पुर्व र सफल कप्तान धोनी ३७ वर्ष पुगि सकेका छन् । १२ औं संस्करणको विश्वकपका लागि उनले टिममा स्थान बनाएपनि अर्को संस्करणमा उनी देखिने छैनन् ।
सन् २०११ मा कप्तान धोनीले भारतलाई घरेलु मैदानमा भएको विश्वकप जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
यस विश्वकप धोनीको चौथो सहभागिता हुनेछ । उनले सन् २००७, २०११, २०१५ को संस्करणको विश्वकप खेलेका थिए ।
३. इमरान ताहिर
विकेट लिएपछि हावामा हात फैलाउँदै तिव्रगतिमा कुँदेर सेलिब्रेसन गर्ने दक्षिण अफ्रिकाका लेगस्पिनर इमरान ताहिर यो विश्वकपपछि एकदिवसीय खेलमा मैदान देखिने छैनन् । उत्कृष्ट सेलिब्रेसनका कारण इमरान ताहिरको मैदानमा सधै चर्चामा रहन्थे ।
दक्षिण अफ्रिकाका सर्वाधिक सफल स्पीनरमध्येका एक ताहिरले ९८ एकदिवसीय खेलमा १ सय ६२ विकेट लिएका छन् ।
४. डेल स्टेन
दक्षिण अफ्रिकन खेलाडी डेल स्टेन विश्व क्रिकेट जगतमा एक प्रख्यात खेलाडीको रुपमा रहेका छन् । उनी विश्वकै सबैभन्दा फास्ट र सबैभन्दा धेरै घातक बलिङ गर्ने खेलाडीको रुपमा चिनिन्छन् ।
गत संस्करणको विश्वकप दक्षिण अफ्रिकाको लागि निकै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको थियो ।
चोटका कारण उनले निकै लामो समय मैदान छाड्नु परेको थियो । ३५ वर्षे उनीबाट अब समर्थकले कम्तिमा पनि १ देखि २ वर्षसम्मको खेल जीवन अपेक्षा गरेका छन् ।
५ . सोयब मलिक
सधैँ एकनास प्रदर्शन गर्ने ब्याटसम्यानको परिचय बनाएका पाकिस्तानका कप्तान सोयब मलिकका लागि यो विश्वकप अन्तिम हुनेछ । पाकिस्तानका सफल क्रिकेटर मध्येका एक भेट्रान सोयबले २ सय ८२ एकदिवसीय खेलमा ७ हजार ४ सय ८१ रन बनाएका छन् । पाकिस्तानका लागि सर्वाधिक अर्धशतक बनाउने सोयबले १ सय ५६ विकेट लिएका छन् भने ९६ क्याच गरेका छन् । १९९९ मा करीअर सुरुआत गरेका उनले गतवर्ष जुनमा जिम्बाबे भ्रमणका बेला सन्यास लिने घोषणा गरेका थिए ।
६ . डेभिड वार्नर
यस विश्वकप वार्नरको अन्तिम विश्वकप रहेको आँकलन गरिएको छ । हालै सकिएको आईपीएलमा निकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका उनले ओरेन्ज क्याप हात पारेका थिए । तर, अर्को संस्करणसम्म उनलाई उमेर र स्वास्थले दिने छैन । ब्याटिङ गर्न निकै भोको देखिने वार्नर सन् २०२३ को विश्वकपमा ३६ वर्ष पुग्नेछन् ।
अष्ट्रेलियाले हरेक वर्ष युवा खेलाडीको जमात तयार पार्ने हुँदा वार्नरले अर्को विश्वकपमा स्थान पाउने सम्भावना निकै कम रहेको छ ।
१७ वर्षपछि सलमान र शाहरुख एउटै चलचित्रमा खेल्दै
आज सुनको भाउ ह्वात्तै घट्यो,हेर्नुहोस् तोलाको कति छ सुनचाँदीको मूल्य ?